February 25, 2021 - Factcrescendo Myanmar
February 25, 2021 February 25, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: တပ်ထောက်ခံသူတွေက အကြမ်းဖက်မှုကို တပ်ထောက်ခံသူ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ်မျှဝေ
ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ဦး တပ်ထောက်ခံပွဲလာသူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရတာကို တပ်ထောက်ခံပွဲ လာသူတစ်ဦးအကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ်မျှဝေထားတဲ့ ဗွီဒီယိုတစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ “တပ်မ​တော်​ထောက်ခံပွဲလာသူတဦးကို နီပိန်းလူမိုက်တစုမှဓါးနဲ့ထိုးတဲ့VIDEOပါ”လို့ရေးသားပြီး “စိမ်းနီမှာ ငါ့အဖြေက”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က မျှဝေထားပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link ဒီဖြစ်စဉ်ကို အခြားသော ရှု့ထောင့်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို “ယနေ့ ရန်ကုန် တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတစ်ဦး ဓားထိုးခံရသော ရုပ်သံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ ၂၅. ဖေဖော်ဝါရီလ. ၂၀၂၁ #ပြည်သူ့ပုံရိပ်မီဒီယာ #အကြမ်းဖက်ခံရ”လို့ ရေးသားပြီး ” ပြည်သူ့ပုံရိပ်မီဒီယာ” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာက မျှဝေထားပါတယ်။ အချက်အလက်စိစစ်ချက် “စိမ်းနီမှာ ငါ့အဖြေက”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက တင်းထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RFA Burmese က ” တပ်ထောက်ခံသူတွေ […]
၂၂.၂.၂၀၂၁(၂ ငါးလုံး)အထွေထွေသပိတ်မအောင်မြင်လို့ နောက်ထပ် အသေခံမယ်လုပ်မယ့်သူတွေ ဆက်သွယ် ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)က ထုတ်ပြန်ချက်အဖြစ် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီစာဟာ အတုပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ပို့စ်မှာ ၂၂.၂.၂၀၂၁ မှာ အထွေထွေသပိတ်ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ မျှော်မှန်းခဲ့ပေမဲ့ လူထုအားလုံးမပါဝင်ခဲ့လို့ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက် အသေခံရဲသူများနဲ့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင် မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၇.၂.၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားစာရင်းပေးကြဖို့ စသည်ဖြင့် ရေးသားထားပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံခဲ့တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ တူညီတဲ့မျှဝေမှုကို ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်စာကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ National League For Democracy မှာမတွေ့ရပါဘူး။ ဒီစာဟာအတုဖြစ်ကြောင်း NLD […]